बाढीले पुर्‍याएको क्षति अवलोकन गर्न ने.क.पा. अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनमा – Janadesh Daily | ePaper
बाढीले पुर्‍याएको क्षति अवलोकन गर्न ने.क.पा. अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनमा
July 11, 2020 July 12, 2020 by Jandesh Daily
काठमाडौं । बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी लिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चितवन पुगेका छन् । ‘प्रचण्ड’ले नारायणी नदीको कटान रोक्नका लागि आवश्यक काम भइरहेकाले डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार चितवन पुगेका उनले नारायणी नदीले कटान गरेको मेघौली र माडी क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन् । मेघौली निउरे चोकमा कटान भएको क्षेत्रको अवलोकनपछि प्रचण्डले बलियो तटबन्ध गराउने तयारी भएको स्थानीयलाई बताए ।
पार्टीभित्रकाे विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको आजको संवादलाई स्थगित गरेर आफू निरीक्षणमा आएको बताए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर आफू निरीक्षणमा आएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।